အလှတရားကိုဘောင်ခတ်မှု မရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့တဲ့ အတုယူဖွယ်အမျိုးသမီး (၁၁) ဦး - ONE DAILY MEDIA
အလှတရားကိုဘောင်ခတ်မှု မရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့တဲ့ အတုယူဖွယ်အမျိုးသမီး (၁၁) ဦး
သူများနှင့်မတူပဲ ပင်ကိုယ်ထူးခြားမှုများဖြင့် မော်ဒန်လောကရဲ့ အလှတရားကို တစ်မျိုးဆန်းစေခဲ့သူ မော်ဒယ်လ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုနဲ့အတူ အလှပဆုံးတည်ရှိနေသူများ အားလုံးကို ချစ်စဖွယ်လူသားများအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
11. Chantelle Brown-Young
ကနေဒါလူမျိုး မော်ဒယ်လ်ဟာ အသက်(၃)နှစ်အရွယ်မှစတင်ကာ အရေပြား အရောင်ခြယ်ချို့ယွင်းမှု ခံစားခဲ့ရသော်လည်း သူမဟာ အားနည်းချက်ကို အားသာချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲကာ ထိပ်တန်းမော်ဒယ်လ်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
10. Viktoria Modesta
လတ်ဗီးယားလူမျိုး မော်ဒယ်လ်နှင့် အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့သူမဟာ မွေးဖွားစဉ်ကပင် ခြေထောက်ကို(၁၅)ကြိမ်တိုင် ခွဲစိတ်ကုသခဲ့ရသော်လည်း ကံမကောင်းစွာပင် ဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်။သိူ့သော် သူမဟာ စိတ်ဓာတ်ကျစရာ ပြသာနာတစ်ခုအဖြစ်တော့ သဘောမထားခဲ့ပါဘူး။
9. Erica Irwin
California ပြည်နယ်မှ အရပ် (၆ပေ ၇လက်မ) ရှိသူ အသက်(၃၅)နှစ်အရွယ် Erica Irwin ဟာ အရပ်အရှည်ဆုံးမော်ဒယ်လ်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
8. Masha Tyelna
အဆို ယူကရိန်းနိုင်ငံသူ မော်ဒယ်ကတော့ ထူးဆန်းသော မျက်လုံးများပိုင်ဆိုင်ထားပြီး “လှပသောမှင်စာလေး” လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
7. Carmen Dell’Orefice
အသက်(၈၄)နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း လှပပျိုမြစ်ဆဲဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးမဂ္ဂဇင်းပေါင်းများစွာမှာ ဖော်ပြခံနေရဆဲဖြစ်သည့်အပြင် ဖက်ရှင်ရှိူးများ ၊ အလှအပဆိုင်ရာ campaigns များမှာလဲ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
6. Jamie Brewer
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Down Symdrome ဝေဒနာရှင် မော်ဒယ်လ်ဖြစ်သည့်အပြင် ထိတ်လန့်ဖွယ်လူသတ် ဇာတ်ဇာတ်လမ်းများမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီး ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။
5. Denise Bidot
သူမကတော့ plus-size မော်ဒယ်လ်များအနက် ထင်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး (၁၂၁)ပေါင်ထက် ပိုများသူ အမျိုးသမီးများအတွက် ဂုဏ်ယူစရာဥပမာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
4. Casey Legler
အရပ်(၆ပေ ၁လက်မ) ၊ မေးရိုးကားကား ၊ ဘိုကေဖြင့် အမျိုးသားတစ်ဦးသဖွယ် ချောမောခန့်ညားနေသူ ပြင်သစ်မော်ဒယ်လ် Casey Legler ကတော့ ပထမဆုံးသော အမျိုးသားဖက်ရှင် ကြေငြာများအတွက် စာချုပ် ချုပ်ရိုက်ကူးခဲ့သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကို Kate Moss လက်သစ် ဟုခေါ်ဆိုကြပြီး သူမ၏ စွေစောင်းနေသော ပုလဲလုံးသဖွယ်မျက်ဝန်းများဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်မျက်ဝန်း ၊ ဖြူဆွတ်‌သော ဆံကေသာနှင့်အသားရောင် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သူ အာဖရိကန်-အမေရိကန် ကပြား တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ရှာပါးသော မျိုးရိုးဗီဇပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဖက်ရှင်လောကရဲ့ လူကြိုက်များ အားပေးခံရသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
1. Lolita, the Black Hannah Montana
A post shared by hacked by chikri (@typicalblackmum)
မီးသွေးသဖွယ် မည်းနက်မှု၏ အလှတရားကို ကမ္ဘာကြီးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူ စူပါမော်ဒယ်လ် “Melanin Goddess” တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမကိုယ်သူမ Black Hannah Montana လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။
Translate by written One Daily Media
မကြာခင် ဒုတိယအကြိမ် ရွက်လွှင့်တော့မယ့် တိုင်တန်းနစ်သင်္ဘောကြီး 😲
ခရီးသွားဧည့်သည်များကို စိတ်ပျက်စေမယ့် အထင်ကရနေရာ (၁၀)ခု